amacebo yocingo ICO - Blockchain News
Ucingo Izicwangciso multi-billion lwedola ICO for cryptocurrency lengxoxo
Encryption qalisa imiyalezo I yocingo zokusungula iqonga yayo blockchain kunye cryptocurrency lokuzalwa, amnike iintlawulo kwi app yayo chat nangaphaya. leyo Ngokutsho imithombo ezininzi bendiyithetha TechCrunch, i "I yocingo Open Network" (ton) liya kuba entsha, 'Kwisizukulwana sesithathu' blockchain nge zenzeko ophezulu, emva Bitcoin no, kamva, Ethereum kwavula indlela.
Ukukhululwa axhaswa elikhulu lokuqala Coin Umnikelo, nge ezayo abucala pre-intengiso esukela kungena amakhulu ezigidi, engase ngokwenza enye ICOs kwelikhulu ukuya kumhla. Imfuno iqhutywa into yokuba kunokuba ICO zivela kuqaliso entsha, Ucingo liqonga imiyalezo esekwe kakuhle kusetyenziswa ehlabathini lonke.
Ukwamkela a cryptocurrency zasekhaya ingaba ukunika inkqubo yentlawulo ukuzimela enkulu incwadi yakhe kuye nawuphi na urhulumente okanye ibhanki - into Co-ngumseki kunye CEO Pavel Durov yaziwa unokunqwenela emva kubatyali wathabatha phezu inkampani yakhe yokugqibela, yenethiwekhi yoluntu Russian VK. Durov akakaphenduli iinzame eziliqela TechCrunch ukuba uqhagamshelane naye malunga eli bali.
Ithuba lokuba kube cryptocurrency ngaphakathi app imiyalezo yamkelwa ngokubanzi yeyabahlali.
Nge cryptocurrency enikwe iintlawulo ngaphakathi yocingo, abasebenzisi ukuba uzakufun aukugqithisa imirhumo uxolelo xa uthumela imali kwimida ngamazwe, ukuhambisa izibalo zemali ngasese ngenxa ufihlo le app ukuba, ukuhambisa micropayments ukuba yikho phezulu kakhulu nemirhumo yekhadi lokuthenga ngetyala, kunye nokuninzi. Ucingo sele de facto ijelo lonxibelelwano lokuba uluntu cryptocurrency jikelele, ngokwenza ikhaya zendalo ingqekembe yayo kunye Blockchain.
Ukuthengisa ton of cryptocurrency
Cingo baqonda ukuba licinga ukunyusa umthamo kangangoko $500 million ekuthengisweni pre-ICO kwi bebonke igugu umqondiso ku ezahlukene $3 billion ukuya $5 billion. kunjalo, ezo amanani akwazi ukutshintsha phambi ICO, leyo bakwazi nje March. Loo manani kuya kwenza kube mhlawumbi crypto zabucala inkulu kummisela ngosuku emva Tezos, owavusa phezu $230 million ngo July.
A pre-yokuthengisa an ICO i ikepusi ubuncinane kutyalo mali (ngezinye ngezaphulelo) ukuba bezimali enkulu ('Imik') phambi kwentengiso ngokubanzi umqondiso kubatyali-ngemiyinge emincinci. uluntu, Isigaba othenge i ICO kudla ukukhulisa ngaphantsi kuba kukho nomsila elide abantu imali encane. Kodwa phambi-kulayishwa ICO kunye notyalo-mali lwamaziko usenza sibe nentembelo bezimali ngemiyinge emincinci.
Abo zimali pre-intengiso ukuba zifake ubuncinane ukuba ayamkelwa of $20 million ukuba sele ngaphandle kwisangqa engaphakathi Durov kaThixo. Imithombo bathi ICO uya kufuna eyake imali yokwenene ezifana zeedola US ukwenzela ukuba ayamkelwa, hayi Bitcoin okanye kaEtere nabanye ICOs ukuba umhla.
Top-tier kwamaziko mveliso mali baye babonisa umdla, kodwa Durov kuthiwa ukuba ziqaphele ukwamkela imali yabo. Enye beqinile amarhe ukuba lalifuna ukuba ulwabelo pre-sale Mail.Ru Group (owayekade DST), yasungulwa emigre Russian kaYuri Milner. A isithethi DST akazange ukuphendula imibuzo yethu ngalo eli bali. Okubangel 'umdla kukuba, Mail.Ru Group na ingxowa-ended up ukuthenga inkampani Durov yokugqibela VK.
Ukuqonda yocingo Open Network
ingcamango Durov kukuba asungule blockchain entsha ngokupheleleyo, usebenzisa incwadi yakhe 180 million abasebenzisi fuel irula ukuba amandla phambili ibe ngowakho eziqhelekileyo off cryptocurrency nokwenza yocingo, ngempumelelo, a kingmaker kwezinye cryptocurrencies, ngenxa yokuba isikali yaso ekhoyo.
Ngokutsho iphepha elimhlophe yocingo ukuba TechCrunch iye ukubuyekezwa iinxalenye, cryptocurrency yayo iya kubizwa ngokuba 'Igram "kwaye ezinokuba bafumane ngoko nangoko abantwana eziqhelekileyo ngokuthi ebotshelelwe chat app yocingo kaThixo.
Imithombo bathi Durov ligqibe ukudibanisa zombini iziseko ezingundoqo kunye ezoba, kuba inethiwekhi amagunya ngokupheleleyo akuthethi umtsi ngokukhawuleza njengoko leyo eye ezinye iimpawu yinye, ngoko ke kutheni yocingo idinga lokuba blockchain yayo.
Incwadi iye yaba ezifayo zokulinganisa lezopolitiko isenzo ukuzama nokugcina abasebenzisi bayo kweli lizwe, iyavala amanye amajelo ngenxa ubiza ukuba ukuwa karhulumente, ngoxa ukugcina abanye evulekileyo.
WeChat Kodwa Nge Crypto
nge ton, Ucingo ijolise ekuphuhliseni eluncedo cryptocurrency-based entsha WeChat, ethe yakhula node wagqithisa app chat aze njengentsika intlawulo emiselweyo kwabaninzi China.
Nangona ntlawulo inokwenziwa ngokukhawuleza kakhulu WeChat ngenxa ngeenkonzo ezahlukeneyo, inkqubo uhlala kwindawo enye kakhulu. Iqonga eyaba ezifana ton awayenokunikela ukhuseleko kunye nokomelela.
Imithombo bathi incwadi uceba ukuvumela abasebenzisi ukubamba zombini incwadi ngayo imali kunye eyake lwemali semali ozayo.
Kukho kwakhona yendalo developer ekhoyo incwadi uye wakha ngeenxa zonke, apho bot kunye neenkonzo ezinikezelwa ngababhekisi phambili zomntu wesithathu. Kwakhona, Ton apha ayikwazanga, ngokwengcinga, underly yonke umqambi Iletha yocingo.
Kwi 132 page iphepha elimhlophe, Ucingo sele kuchaziwe isicwangciso-sigaba ezine:
"Iinkonzo Ton" iya kuba liqonga iinkonzo zomntu wesithathu lwalo naluphi na uhlobo yenza smartphone ngathi lwenjongano friendly apps amagunya kunye nezivumelwano smart.
"DNS Ton" yinkonzo bokunikeza amagama abantu-ezinokufundwa akhawunti, Iinkonzo izivumelwano smart kunye nothungelwano ezalathelwe. Nge Ton DNS, abafikelela kwiinkonzo zokwabela abaphantsi amagunya bafane "nokubukela iwebsite kwi-World Wide Web."
"Ton Iintlawulo" Eli liqonga micropayments kunye inethiwekhi micropayment channel. Ijolise kusetyenziselwa "yethutyana off-chain transfers ixabiso phakathi kwabasebenzisi bot kunye nezinye iinkonzo '. Izikhuselo elakhelwe nkqubo zilungiselelwe ukuba ziqinisekise ukuba ezi transfers "zezi kunqabisa ngoko kwi-chain transactions".
I "Ton Blockchain" uya kuba master chain no-2-to-the-amandla-of-92 blockchains ezihamba. imbonakalo yawo kakhulu oluphawulekayo ukuba uza kuba "Infinite Sharding wenguqulo" ukuphumeza scalability. Ngaloo ndlela, blockchains Ton zijolise ukuba bakwazi "ukwahlula ngokuzenzekelayo yaye uhlanganise ukulungiselela utshintsho umthwalo". Oku kuthetha iibhloko abatsha uzikise ngokukhawuleza kwaye 'kungekho imingcelele emide inceda ukugcina kuthenga nendleko eziphantsi, nokuba ezinye iinkonzo usebenzisa iqonga babe zehle ezithandwayo ".
Kwakhona uya kuba 'Instant Hypercube yomgudu "yenziwe ukuze blockchain uyakwazi ukugcina isantya phezulu njengokuba ikhula. ubungqina Its lwendlela esibondeni uya ukufikelela kwimvumelwano ngawo eyongeziweyo lobeko lwe 'Byzantine Icala Niyazihlonela' protocol, kwakhona ukunyusa isantya kunye nokusebenza. Kwaye kwakhona uya kusebenzisa nezikali-2-D-ngcombolo. Oku kuthetha ton zikhula iibhloko ezintsha esebenzayo ngaphezulu naziphi iibhloko ukuba kungafumaniseka ukuba engachanekanga ukuthintela naziphi neefolokhwe ezingeyomfuneko. Ngamanye amazwi, Ton ijolise ukuba 'self-impiliso'.
blockchain isizukulwana wesithathu ton iza kusekelwa phezu 'ubungqina esibondeni' iyanetha olubekwe yi amaqela ezininzi iqondo eliphezulu fault unyamezelo. Kwakhona uya kulenza ukugcinwa ID, iintlawulo izivumelwano smart. ke, kunokuba athembele ubungqina umsebenzi ukudala imali yayo, Ucingo uthembele entsha, kangako indlela cryptocurrency imigodi ngaphezu indlela original Bitcoin-hogging amandla.
Ibango kukuba kuya kuba ikwazi inani uphakeme zentengiselwano, emhlabeni 1 million ngomzuzwana. Ngamanye amazwi, efana amabhongo yeprojekthi Polkadot ngaphandle Berlin - kodwa i base ifakiwe of 180 abantu million. Oku kwenza i 'interchain' kunye ebizwa ngokuba 'sharding onamandla'.
Iphepha elimhlophe kwakhona wenza ekhulwini kucace ukuba ezine kubonelelo grams (200 million grams) ziya kugcinelwa iqela yophuhliso I yocingo kunye kwisithuba nagunya iminyaka emine. Ucingo kwakhona uceba ukugcina "ubuncinane 52 ekhulwini "sonke nangoncedo grams cryptocurrency ukuze awukhusele zorhwebo lentelekelelo nokugcina kukhuthaze. Okushiyekile 44 ekhulwini ziya kuthengiswa kuzo zombini intengiso karhulumente nawabucala.
Le lwangoku luzakubekwa kuluhlu ukutshintshiselana zangaphandle kwaye isetyenziswe ngaphakathi yocingo app.
Ixesha olumke, kwikota yokuqala kulo nyaka siza kubona ukusungulwa yocingo yangaphandle ID Secure, kulandele i MVP weetoni. Ukuphehlelelwa iitelegram Wallet ekugqitywe ekubeni Q4 2018, kunye nokudalwa uqoqosho ngetoni-based into iqaliswa ngo Q1 2019. Ezinye leeNkonzo ngetoni nilandele q2 2019.
Ezinye ekuhlaleni crypto kuhlala abakholwanga ton. "Ndicinga nje le ndlela CEO ngayo imali yocingo, kukulawula,"Uthi Jackson Palmer, umsunguli cryptocurrency ekuqaleni Dogecoin.
A umthombo techcrunch.com
Kulo nyaka uphelileyo, NDIYABONA...
Post Previous:Blockchain News 8 EyoMqungu 2018
Post Next:Blockchain News 9 EyoMqungu 2018